बिचार/ब्लग – PuraKhabar
June 11, 2018 पुराखबर
लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विवेचना गर्दै यदि नेपालको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाबीच राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन् । नेपाल आजको नियमित स्तम्भ कुरा:खस्रामीठा शृंखलाका लागि बिहीबारको अन्तर्वार्तामा विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रचण्डको दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति हो र त्यसैअनुसार उहाँले दीर्घकालीन राजनीतिक योजनाअन्तर्गत स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको कुरा उठाउनुभएको हो । अब हेर्न मात्र बाँकी छ कि उहाँ त्यो एजेन्डा लागू गराउन कत्तिको सफल हुनु होला वा असफल । तर,…
May 19, 2018 पुराखबर
राम बराल- गत चैत्रमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्यो । अघिल्लो बर्ष चैत्रसम्ममा नेपाल भित्रिएको भन्दा यो बर्ष ५दशमलव ६ प्रतिशत धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आयो । २०७४ साउन देखि चैत्र भित्र नेपालमा ५ खर्व ४० अर्व३८ करोड रकम विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रियो । अघिल्लो बर्ष झण्डै ७ खर्व रेमिट्यान्स भित्रियाएकोनेपालका लागि राष्ट्र बैंकले यो तथ्याँक सार्वजनिक गरिरहँदा खुशीकै कुरा हो । तर त्यहि विप्रेषणले थपेकोचिन्ताको पाटो भनें छुट्टै छ । नेपालमा जुन दरमा विदेशमा काम गर्न जानेहरुले कमाएर पठाउनेविप्रेषणको ग्राफ उकालो लागेको छ डिप्रेसनको समस्या बोकेर फर्किनेहरुको संख्या पनि उहि गतिमा बृद्धिहुँदैछ । घटना १ कावासोती १५ का श्यामकुमार रोजगारीको शिलशिलामाकरिव डेढ बर्ष अघि साउदी अरव गएका थिए । परिवारपाल्न, छोराछोरी पढाउने उद्धेश्यले साउदी पुगेका उनलाईघरको याद निक्कै आइरह्यो । विदेशमा राम्रैसँग कमाउँला,घर बनाउँला, आफन्तलाई पनि उपहार बोकेर फर्किनेउनको आशा चकनाचुर भएको छ । किनकी उनले साउदीअरवमा पुगेपछि नेपालमा भनिएअनुसारको काम पनिपाएनन् र तलव पनि पाएनन् । यसले नेपालमा हरेकमहिना पैसा पठाउने उनको सपना पुरा भएन । १ लाख ५० हजार ऋण लिएर गएका थिए । त्यो ऋणको व्याजले यता नेपालमा श्यामकी श्रीमतिलाईपोलिरहेको थियो । उता साउदीमा रहेका श्यामकुमारलाई आफूले लिएको ऋणको बढ्दो व्याज, त्यो व्याजकसरी श्रीमतिले तिरिन् होला, छोराछोरी कसरी पढ्दै होलान्, के खाए होलान्, श्रीमतिलाई निन्द्रा लाग्यो कीलागेन होला यस्तै चिन्ता बढ्दै गयो । यसले श्यामकुमारमा विस्तारै समस्या देखिन थाल्यो ।खान मन लाग्न छोड्यो, टोलाएर बस्न थाले । मनमा अनेकथरी कुरा खेल्न थाले । मरुँ- मरुँ लाग्न थाल्योउनलाई । केहि दिन विदा लिएर बसेका उनी काम गर्न नसक्ने स्थीतिमा पुगे । त्यसैले कम्पनीले उनलाईनेपाल फर्काइदियो । श्याम फर्किएपछि उनले कमाएर ल्यालान् भनेर बसेको परिवारको सपना सवै चकनाचुर भयो । एकातिरउनी विदेश जाँदा लागेको ऋण त २ लाख छँदैथियो त्यसमाथि ऋण खोजेर उनकी श्रीमतिले भरतपुरमाउपचार गराइन् । उपचारका क्रममा डाक्टरले उनलाई चिन्ता भएको र त्यो चिन्ताको उपचार नगरेका कारणडिप्रेसन भएको बताए । अहिले उनी डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेका छन् र क्रमशः केहि ठिक हुँदै गएकाछन् । घटना २ कावासोतीकै शर्मिला बैदेशिक रोजगारका लागि ओमान पुगेकी थिइन् । ५ बर्ष अघि ओमान पुगेकीशर्मिलाको धेरै ठूलो सपना केहि थिएन । उनी आफ्नो सानो झुपडीमा टीनको छानो हाल्ने सपना देखेरओमान् पुगिन् । तर उनी त्यहाँ पुगेको केहि समयपछि उनले कल्पना नै नगरेको घटना हुन पुग्यो । घरमा एउटी छोरी र श्रीमानलाई छोडेर केहि रकम कमाएर पठाउने आशमा गएकी उनी त्यहाँ बलात्कारकोशिकार भइन् । यद्यपी उनी यो कुरा कसैसँग बताउन्नन् तर उनका अन्य कुराहरुले उनी बलात्कारमापरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनी जसोतसो नेपाल त फर्किन सफल भइन् तर मानसिक रुपमा विक्षिप्त जस्तै भएर । उनका बारेमाअहिले पनि गाउँलेहरु ‘पागल’ भएर विदेशबाट फर्किएकी भन्दछन् । उनी नेपाल फर्किएपनि घरमा नबस्ने,श्रीमानसँग पनि कुराकानी नगर्ने अवस्थामा पुगिन् । उनलाई म कहाँ जाँदैछु र किन जाँदैछु भन्ने पनि थाहाहुन्नथ्यो । मैले भेट्दा उनको अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो । मैले भेटेको दिन उनी घरमै थिइन् ।दिउँसोको २ बजे उनले विहानको खाना पनि खाएकी थिइनन् । लेवरको काम गर्ने श्रीमान विहानै काममानिस्किएका थिए । शर्मिलालाई हामीले भरतपुरको अस्पतालमा लगेर डिप्रेसनको उपचार गरायौं । औषधिको सेवन र परिवारलेमानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको सुधारका लागि गरेको प्रयत्नपछि अहिले उनमा विस्तारै परिवर्तन आएकोछ । घरमा टीन लगाउने सपना देखेर विप्रेषणको आशमा विदेश पुगेकी शर्मिला अहिले डिप्रेसनको औषधिसेवन गरिरहेकी छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन । काम गर्ने दौरानमा मैले भेटेका थुप्रै व्यक्तिहरु आफूले देखेको सपना पुरा नभएरविदेशबाट फर्किंदा मानसिक स्वास्थ्य विग्रिएर फर्किएका छन् । बैदेशिक रोजगारमा जान्छु भनेर सपना बुन्नु जति सजिलो छ, यो व्यवहारमा उति नै जटिल पनि छ ।त्यसैले विप्रेषणको आशमा विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भनें डिप्रेसनमा पर्नबाट जोगिनका लागि केहि विषयमासुरुमा नै सचेत हुनु पर्दछ । म कुन देश जाने हो, कुन मेनपावर कम्पनी मार्फत जाने हो, आफूसँग भएकोसीप र गर्नुपर्ने काम, लाग्ने लागत, कानूनी रुपमा कसरी बलियो भएर जाने भन्ने कुरामा विशेष ध्यानदिनुपर्दछ । छिमेकी बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर दुई तल्लाको घर बनाए भन्ने देखेर मात्र आँखा चिम्लेर विदेश जानुहुन्न । बैदेशिक रोजगारले सिर्जना गर्ने सामाजिक, शारिरीक मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा पनि सचेत रहनुपर्दछ । बैदेशिक रोजगारमा जाने भनेको त्यहाँ पैसा कमाएर नेपाल पठाउने भन्ने हो । अझ गाउँमा काम गर्नेधेरैजसो एजेण्टहरु तथा मेनपावर कम्पनीहरुले उनीहरुलाई देखाइदिने ठूलो सपनाले उनीहरुलाई अझ धेरैअपेक्षा हुन्छ विदेशमा हुने कमाईका बारेमा । ठूलो कमाईको आशमा यता ऋण लिएर गएको हुन्छ, तरविदेश पुगेपछि सोचे अनुसार, भनेअनुसार कमाई नहुँदा मान्छे छाँगाबाट खसेजस्तै हुनसक्छ । अर्कातिरविदेशमा आफ्नो मान्छेलाई परेको त्यो तनावका बारेमा नेपालमा हुने घरपरिवार बेखवर हुनसक्छ ।उनीहरुले ऋणको तनाव, पारिवारिक आवश्यकताका कारण छिटो पैसा पठाउ मात्र भनिरहेको हुन सक्छ ।यसले विदेशमा हुने व्यक्तिलाई अझ धेरै मानसिक दवाव पर्दछ । विदेशमा भएको व्यक्तिले योसमस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छु होला भन्ने निक्र्यौल गर्न सकेन भनें समस्या बढ्दै जान्छ । यसलेउसलाई खान मन नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, कोहिसँग पनि खुलेर कुरा गर्न नसक्ने अवस्था बढ्दै जान्छ । त्यसैले कोहि कमाउन विदेश गएको छ र आफूलाई कमाईका विषयमा कुनै त्यस्तो समस्या परेको छ भनेंघरपरिवारसँग, आफ्नो मिल्ने साथिसँग यसका बारेमा भन्नुपर्दछ । जसका कारण उसको तनाव केहि कमहुन्छ र समस्या समाधानको बाटो पनि देखिन्छ । आफ्नो परिवारमा कसैलाई त्यस्तो समस्या परेको भएमासुचना केन्द्रमा आएर भनेमा हामीले त्यसमा सहयोग गर्न सक्दछौं । विदेशमा भएको व्यक्तिले पनि आफूले विदेशमा कमाउन सकेको रकम नियमित रुपमा स्वदेश पठाउने,नियमित रुपमा परिवारसँग सम्पर्कमा रहने र कुराकानी गरिरहने, सामान्य समस्याका बारेमा पनिपरिवारसँग छलफल गर्ने, एकापसमा झर्केर नबोल्ने र एकापसमा विश्वास गर्ने गर्नु पर्दछ । एकापसकोमाया, प्रेम, सद्भाव र विश्वासका कुराले विप्रेषण कमाउन गएको मान्छेलाई डिप्रेसनमा पर्नबाट जोगाउँदछ। नेपालीमा उखान छ नी, रोग लागिसकेपछि उपचार गराउनु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु निको । हो, बैदेशिकरोजगारका कारण बढेको डिप्रेसनलाई कम गर्न सकिन्छ, त्यसैले सधैं सचेत बनौं । (नवलपरासी, सुस्ता पूर्वका बासिन्दा बराल मनोपरामर्शदाता हुन् ।
May 14, 2018 पुराखबर
महिला र पुरुषको सम्बन्ध प्रेममा मात्र होइन विभिन्न उतार चढावमा आधारित हुन्छ ।कतिपय कुरा यस्ता छन् जुन पुरुष आफ्नी प्रेमिका वा पत्निको मुखबाट कहिल्यै पनि सुन्न चाँहदैनन् । यहाँ कुनै पनि महिलाले आफ्नो पति वा प्रेमीलाई भन्न नहुने ५ कुराको चर्चा गरिएको छ । १ पति वा प्रेमीले साथी भाइसँग बसेर मदिरा सेवन गर्दै छ भने उसलाई अर्को गिलास पनि खाने । यति धेरै पिउने भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्नुस् । यस्तो गर्दा पुरुषले अपमानित महसुस गर्छन् र सम्बन्धमा समस्या आउँछ । २ पति वा प्रेमीलाई उसको पूर्व प्रेमिकासँग अझै…
एक नयाँ बिचार र बिकासको मार्गदर्शन
May 9, 2018 पुराखबर
देशको आर्थिक स्थिति धराशायी हुने अवस्थामा छ । देशलाई पहिले राणाले लुटे त्यसपछि पन्चहरुले लुटे अनि बहुदलबादिहरुले कम्मर कसि कसि लुटे अनि पालो पुर्याएर गणतन्त्रबादी हरुले मिलेर देशलाई त खोक्रै बनाईहाले अहिले आयी ती लुटने हरुले विशाल जमात बनाएर संघीयताको मुखुण्डो ओडि देशलाई नँग्याउने जालो बुनि सकेका छन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याई देशको सर्वांगिण बिकास गर्ने नारा दिएर देशमा संघीयता लादियो । तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र बिकास हैन देश र जनताको खुन चुस्ने सिंह ठड्याइए को जस्तो जनताले महसुस गरि सकेका छन । तर जननेता भनाउदाहरु भाषण मा…
म अब सायद बिरामीको सेवामा फर्कन पाउने छैनः डा उपेन्द्र देवकोटा
May 4, 2018 May 4, 2018 पुराखबर
प्रख्यात न्यूरोसर्जन डा। उपेन्द्र देवकोटा अहिले न्यूरो अस्पताल बाँसबारीमा उपचारार्थ भर्ती हुनुहुन्छ। अस्पतालको ‘होप’ अर्थात ‘आशा’ नामक खण्डमा रहे पनि आक्रामक रोगले गाँजेकाले छोटिँदो जीवन नेपाल आमाकै काखमा बिताउने अठोट छ उहाँको। चिकित्सा पेशामा लागे पनि मुलुकको राजनीति, संविधान र परिवर्तन, सामाजिक सद्भाव, व्याप्त भ्रष्टाचार र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वबारे उहाँका चिन्ता र मान्यतामा स्वास्थ्य अवस्थाले कुनै प्रतिकूल असर पारेको छैन। आफूलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न अस्पताल पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतलाई ‘नेपालभन्दा सुन्दर मुलुक दुनियाँमा अर्को छैन’ भन्न बिर्सनुहुन्न। अस्पतालमा एउटा भेटमा डा। देवकोटाले भन्नुभयो, ‘मर्न लागेको मान्छेले असत्य बोल्दैन। म…
सन्चार मन्त्रीलाई खुल्ला पत्र-‘एन्सेलले तिर्नु पर्ने खरब तिरेको छैन मन्त्रीलाई अरबको मोबाइलले टाउको दुखायो ?’
April 4, 2018 पुराखबर
सन्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा ज्यु, सात समुन्द्र पारिबाट यो परदेशीको नमस्कार ! यता गर्मी असाध्यै बढेको छ,पसिना,रगत र जवानी मरुभुमिको बालुवामा पग्लिरहेको छ। आसा छ यहाले चड्ने गाडिको AC बिग्रीएको छैन होला। पसिना,रगत जवानी सबै सकुशल नै छ होला किन कि तपाईं त मन्त्री जस्तो मान्छे तपाईं अस्वस्थ हुनुभयो भने देश अस्वस्थ हुन्छ ! अनि बसाई कस्तो छ तपाईंको ? मेरो चाहिँ एताको डेरा बालुवाघारीमा छ,हरेक रात तारा झर्छ अनि दिनमा पनि असाध्यै घाम झर्छ अनि उता नेपालको पनि उस्तै छ हालत,हजुरलाई के सुनाउनु पुरै आकाश नै झर्छ रे। तपाईको…
म दुइअाेटा श्रीमान राख्छु: रवीना देशराज
April 2, 2018 April 2, 2018 पुराखबर
काठमाडाै, १९ चैत । सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजले अाफुले २ वटा श्रीमान राख्न चाहेकाे बताइकी छन । प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकममा प्रकासित अन्तर्वातामा यस्ताे बताएकी हुन । देशराजलाइ महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ? भन्ने प्रश्नमा ‘मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ । उहाँले एउटा ग्यादरिङमा हजुरवा, हजुरवाका तीनजना श्रीमती र छोराछोरी सबै जम्मा भएको भन्नुभयो । ल त्यहि ठाउँमा हजुरआमाका तीनजना श्रीमान जम्मा भएको भनौं त ? एउटा पुरुषका तीन श्रीमती एकै ठाउँ…
टीकापुर घटनामा दिवंगत प्रहरी निरीक्षकका छोराछोरीले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो मार्मीक खुलापत्र
March 20, 2018 March 20, 2018 पुराखबर
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीज्यू ! सर्वप्रथम अत्यधिक बहुमतले प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा बधाई छ । आज तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको करिब एक महिनापछि हामी चार भाइबहिनी तपाईँलाई एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छौँ । तपाईंले पत्रपत्रिकाबाट पक्कै पनि खबर सुन्नुभएको हुनुपर्छ २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित ५ जना प्रहरी र २ जना सशस्त्र प्रहरीको हत्या भएको थियो । त्यही घटनामा एकजना डेढ वर्षे बालकले समेत ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । हाम्रा बाबा प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टको पनि हत्या गरिएको थियो सोही घटनामा । हामीलाई…
जिबनमा सोचे जस्तो सफलता नपाएर निराश बन्नुभएको छ ? अपनाउनुहोस लक्ष्यप्राप्तिका लागि १० टिप्स !
March 18, 2018 पुराखबर
लिथुआनियाकी ज्याभलिन थ्रोअर इन्गा स्टासियुलिओनिटीले आफ्नो २२ वर्षभन्दा लामो खेलाडी जीवनका दौरान ओलम्पिक तथा विश्व च्याम्पियनसिपसहित थुप्रै प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिन् । दुई दशक लामो खेलाडी जीवनमा विश्वका उत्कृष्ट प्रशिक्षकको रोहवरमा रहेर अभ्यास गरेकी इन्गाले सन् २०१६ यता मोटिभेसनल साइकोलोजीका विषयमा प्रशिक्षण दिनका लागि ‘अन्बोट्रेनिङ’ नाम अनलाइन कम्पनी खोलेकी छिन् । जीवनमा चाहेको लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने ? यस विषयमा इन्गाले दिएका १० टिप्स यस्ता छन् : १. आफ्ना प्रतिबद्धतामा फोकस हुनुहोस् तपाईं आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिमा कत्तिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ? आफ्नो लक्ष्य तपाईंका लागि कति महत्वपूर्ण छ र त्यो हासिल गर्नका लागि…
जिबनमा सोचे जस्तो सफलता नपाएर निराश बन्नुभएको छ ? अपनाउनुहोस लक्ष्यप्राप्तिका लागि १० टिप्स